0 Thursday September 23, 2021 - 17:35:08
Ehellada dadkii shacabka ahaa ee lagu xasuuqey nawaaxiga deegaanka Golweyn, islamarkaana todobaadyadii lasoo dhaafay banaanbaxyo ka waday magaalada Muqdisho ayaa soo saaray war cusub.
0 Thursday September 23, 2021 - 17:33:16
Idaacadda Alfurqaan ayaa bilaawday barnaamij qiima badan oo ku saabsan cuntada iyo faya dhowrkeeda.
0 Thursday September 23, 2021 - 17:30:29
Wararka ka imaanaya gobolka Nugaal ayaa sheegaya in ciidamada maamulka 'Puntland' ay xanibaad kusoo rogeen dad doonayay in wasiir katirsan DF-ka ay kusoo dhoweeyaan Garoowe.
0 Thursday September 23, 2021 - 16:17:47
Isku dhaxyaac iyo qoob gariir ayaa usoo galay maamullada degmooyinka iyo deegaannada ismaamulka Amxaarada dalka Itoobiya kadib markii ay maleeshiyadka qowmiyadda Tigreega taqadum ballaaran ka sameeyeen jabhadaha dagaalka.
0 Thursday September 23, 2021 - 12:32:51
Wararka ka imaanaya gobolka Sh/hoose ayaa sheegaya in weeraro khasaara dhaliyay lagu beegsaday ciidamo katirsan dowladda Federaalka Soomaaliya.
0 Wednesday September 22, 2021 - 11:55:16
Wararka ka imaanaya gobolka Baay ayaa sheegaya in xoogag hubaysan ay dileen mid kamdia ergadii soo xushay xildhibaannada baarlamaanka dowladda Federaalka.
0 Wednesday September 22, 2021 - 09:45:54
Xilli uu sii xoogeystay khilaafka udhaxeeya madaxtooyada iyo xukuumadda Federaalka ayay awaamir iskasoo horjeedo kasoo baxday maamulka gobolka Banaadir iyo wasaaradda amniga.
0 Wednesday September 22, 2021 - 09:03:59
Xukuumadda Suudaan ayaa shaacisay in ay gacanta ku dhigtay dhammaan askartii iyo saraakiishii ku lug laheyd Inqilaabkii fashilmay ee shalay dhacay.
0 Tuesday September 21, 2021 - 16:11:44
Dilal qorshaysan oo lagu beegsanayo askarta iyo saraakiisha dowladda Federaalka ayaa si xowlli ah uga socda qaar kamid ah degmooyinka gobolka Banaadir.
Kumuu ahaa Jeneraal Max'med Xuseen wasiirkii hore ee difaaca Masar.
0 Tuesday September 21, 2021 - 16:04:44
Isbitaal kuyaal magaalada Alqaahira waxaa ku geeriyooday mid kamida jeneraallada ugu caansanaa melleetriga Masar kaasi oo taariikh madoow lahaa.
0 Tuesday September 21, 2021 - 12:30:54
Kumanaan katirsan ciidamada Booliska dowladda Kenya ayaa lagusoo daadiyay waddooyinka waaweyn ee magaalada Nairobi.
Askar iyo saraakiil ku dhintay weeraro ka dhacay degmada Dayniile.
0 Tuesday September 21, 2021 - 11:59:42
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weeraro khasaara badan dhaliyay oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay xaafado katirsan gobolka Banaadir.
Fahad Yaasiin oo dib ugusoo laabtay magaalada Muqdisho.
0 Visits: 438 | Tuesday September 21, 2021 - 11:30:16
Ciidamo aad u hubaysan oo katirsan madaxtooyada Villa Somalia ayaa saaka aroortii hore gaaray garoonka diyaaradaha Muqdisho si ay usoo gelbiyaan taliyihii hore ee Sirdoonka.
0 Monday September 20, 2021 - 20:01:35
Mu'asasada Alkataa'ib ayaa baahisay qeybtii 5aad ee silsiladda ساء مايحكمون oo lagu faaqidayo dastuurka Soomaaliya iyo xeerarka baalmarsan shareecada Islaamka ee ay ku dhaqanto dowlada federaalka Soomaaliya.
Dhagayso Barnaamijka Badqabka Cuntada (03).
0 Monday September 20, 2021 - 13:31:53
0 Monday September 20, 2021 - 11:58:21
Dowladda Jabuuti ayaa sheegtay in ay soo hagaagtay xaaladda caafimaad ee Ismaaciil Cumar Geelle kaasi oo maalmihii lasoo dhaafay xanuunsanayay.
Shirkii shakiga badan laga qabay oo aan ka furmin magaalada Garowe.
0 Monday September 20, 2021 - 11:49:44
Madaxda maamul goboleedyada ayaa ku fashilmay in waqtigiisi ay ku qabtaan shir lagu ballamay in uu ka dhaco magaalada Garowe ee gobolka Nugaal.
0 Monday September 20, 2021 - 11:32:18
Tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helay qaraxyo ay ku dhaawacmeen mas'uuliyiin katirsan maamulka Koonfur Galbeed kaasi oo ka dhacay gobolka Baay.
0 Sunday September 19, 2021 - 12:13:13
0 Sunday September 19, 2021 - 08:53:53
Tafaasiil dheeri ah ayaa laga helayaa weerar lagu dilay sarkaal katirsanaa ciidamada melleteriga dowladda Federaalka Soomaaliya.
0 Sunday September 19, 2021 - 08:40:58
0 Sunday September 19, 2021 - 08:01:43
Wararka ka imaanaya dhulalka Falasdiin ayaa sheegaya in ciidamada Yahuudda ay dib uxireen laba dhalinyaro maxaabiis ah oo laba isbuuc ka hor ka baxsaday xabsi amnigiisa si aad ah loo ilaaliyo.
0 Saturday September 18, 2021 - 17:56:46
Afhayenka Xarakada Daliban Thabiixulaah Mujaahidi ayaa markii ugu horreysay shaaca ka qaaday i nuu mudda badan ku noola Magalada Kabul oo ah caasimada dalka Afghanistan.Afhayenka Xarakada Daliban Thabiixulaah Mujaahidi ayaa markii ugu horreysay shaaca ka qaaday i nuu mudda badan ku noola Magalada Kabul…
0 Saturday September 18, 2021 - 13:16:02
Khasaara dhimasho iyo dhaawac leh ayaa ka dhashay qaraxyo iyo iska hor'imaadyo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanno katirsan gobolka Bari.
0 Saturday September 18, 2021 - 12:24:29
Madaxweynihii ugu xukunka dheeraa dalka Al Jazaa'ir oo geeriyooday.
0 Saturday September 18, 2021 - 11:32:34
Warsaxaafadeed kasoo baxay madaxtooyada Al Jazaa'ir ayaa lagu sheegay in uu geeriyooday Cabdi Caziiz Botafaliiqa oo muddo ka badan 20 sano wadankaas oo maamulayay.
0 Saturday September 18, 2021 - 10:05:57
Dagaal ooge Bashiir Raage oo halaagsamay!
0 Friday September 17, 2021 - 13:32:55
Mid kamida dagaal oogayaashii caanka ka ahaa Koonfurta Soomaaliya ayaa si lama filaan ah ugu dhintay magaalada Muqdisho.
0 Thursday September 16, 2021 - 19:54:11
Mu'asasada warbaahineed ee Alkataa'ib ayaa baahisay qeybtii 4aad ee taxanaha lagu falanqeynayo qodobada gaalnimada ah ee kujira dastuurka DFS.
Farmaajo oo awoodihii fulineed ka xayuubiyay R/wasaare Rooble.
0 Thursday September 16, 2021 - 16:09:08
Warqad kasoo baxday xafiiska madaxweyne Farmaajo ayaa lagu sheegay in lahakiyay awoodihii siyaasadeed ee R/wasaare Rooble.
0 Thursday September 16, 2021 - 13:16:37
Dablay hubaysan ayaa markale wadanka Kenya ku qafaalatay sarkaal sare oo katirsan booliska wadankaas balse ah soomaali.
Dhagayso: Barnaamijka Badqabka Cuntada (02).
0 Thursday September 16, 2021 - 12:38:07
0 Thursday September 16, 2021 - 12:20:32
« Prev1234567 ... 411Next »